EMBA iyinkampani yaseCzech enesiko eside kanye nendlela enomthwalo wemfanelo emphakathini nasemvelweni. Imikhiqizo yayo ephilayo ikhiqizwa ukucubungulwa kwephepha futhi iyabuyekezwa ngokuphelele. Ngemikhiqizo yayo ye-EMBA, ibuye ibe negalelo ekuvikeleni nasekulondolozweni kwefa lamasiko namlando emazweni amaningi. Njengomqashi omkhulu wesifunda, unesibopho sokuthuthukisa izimo zokusebenza eziphephile neziphephile zabasebenzi bakhe, kanye nokuzimisela ekubambeni ekuqineni komphakathi esifundeni sonke.
Ukuqala kwesakhiwo se-pasteboard efektriya ePaseky nad Jizerou kwenzeka ngo-1882, lapho abafowethu baseRössler basungula ifektri ukukhiqizwa kwamakhadibhodi amhlophe enziwe ngezandla ngemikhiqizo yokufaka embonini yengilazi esifundeni saseJablonec. Isikhathi sonke esengeziwe sempilo yenkampani sibonakaliswa ngokwanda kohlelo lokukhiqiza nendawo yokukhiqiza.
Izingqophamlando ezibalulekile emlandweni wesitshalo se-pasteboard, ngaphezu kwakho konke, ukufakwa kwemishini yokufaka ama-cartoning ngeminyaka yango-1970 nango-1989, okwaletha ukwanda okukhulu kokukhiqiza kahle. Ngeminyaka yama-XNUMXs, ngaphansi komkhiqizo we-EMBA, ukuthuthukiswa kwamakhabethe okugcina umlando wokugcina ngokuphelele umlando wamadokhumenti webhizinisi nezamasiko kwaqala. Inkulungwane entsha yeminyaka, iphothifoliyo yokukhiqiza yaqedwa ngemigqa yokukhiqizwa kwe-office lever abahlanganisi.
Siyazazi ifa lezizukulwane ezedlule, okusiholela kulolu suku kanye nokuzibophezela kwethu ekuthuthukiseni ngempumelelo umsebenzi oqalisiwe. Njengengxenye yomzamo oqhubekayo wokuba isinyathelo esisodwa ngaphambi komncintiswano wethu, sigcizelela izinga lomkhiqizo kanye nobuhlobo bamakhasimende.
Ubuchwepheshe bethu bezobuchwepheshe kanye nabasebenzi bethu abaqeqeshiwe kakhulu yisiqinisekiso esihlala isikhathi eside sezinga eliphezulu lenkonzo. Asigcini nje ukuthengisa imikhiqizo, kodwa sinikeza izixazululo eziphelele kumakhasimende angaphezu kwamazwe we-30 emhlabeni jikelele.
I-EMBA ihileleke kakhulu emkhakheni wezinsizakalo nezenhlalakahle. Ihlanganyela ekwakhiweni kwemiklamo ezuzisayo emphakathini nekhono lendawo ukuze kwenziwe imisebenzi engaphezu kwemingcele yeCzech Republic.
EMBA iwine round lesifunda mncintiswano Amathuba esifanayo, umncintiswano ehlonishwayo kazwelonke abaqashi ovumela abantu abakhubazekile amathuba alinganayo emakethe yezabasebenzi futhi ngenkuthalo neqhaza nembulunga umphakathi.
EMBA EMBA spol. s ro amakhadibhodi smooth zintaba iphepha mill Paseky nad Jizerou isibopho ukudayiswa amakhadibhodi ukukhiqizwa amakhadibhodi production paper
Amathegi: EMBA EMBA spol. s ro amakhadibhodi smooth zintaba iphepha mill Paseky nad Jizerou isibopho ukudayiswa amakhadibhodi ukukhiqizwa amakhadibhodi production paper
Indawo: UPaseky nad Jizerou 235, 512 47 Paseky nad Jizerou, Czech Republic